सावधानी नअपनाउँदा मासुले निम्त्याउँछ खतरनाक रोग
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । दशैं आयो कि मासु खाने दिन आयो भने जसरी लिइन्छ । दशैं लगभग मासुकै चाडका रुपमा र तिहार भने फुल र मिठाइका चाडमा रुपमा स्थापित भइसकेको छ । दशैंका सप्तमी, अष्ठमी र नवमी विशेष गरी बलि दिने दिनहरु हुन् ।
अष्टमीका दिन बलि धेरै नै बलि दिइन्छ ।
यो दिनको बलिको हिसाब गर्ने हो भने कति बोका, खसी, च्याङ्ग्रा र राँगाहरु काटिन्छन् भन्ने कुनै हिसाबै छैन । राजधानीमा भित्रिएका लाखौं बोका, खसी र च्याङ्ग्रा यही दिनदेखि सिद्धिसकेका हुन्छन् ।
सप्तमीका दिन भरिभराउ बन्ने काठमाडौंको खसीबजार नवमीका दिन पुग्दा रित्तिसकेको हुन्छ भने दशैं आउने बित्तिकै कति रकम बराबर पशु नेपालमा भित्रिन्छन् भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
बलि दिने तर खान नजान्ने ?
महाअष्टमी देशभरका शक्तिपीठ र घरघरमा बलि दिने गर्छन् लगभग ९० प्रतिशत दशैं मनाउनेहरुले । बलि दिदा बोका, खसी, राँगा, कुखुरा, हाँस लगायत पर्छन् ।
दशैंमा मासुको उपभोग नै ज्यादा हुन्छ ।
तर मासु खान जानिएको छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न हरेक दशैं र पर्व मनाउनेहरुलाई सोध्ने हो भने, धेरैलाई थाह नहुन सक्छ ।
मासु खाँदा सावधानी अपनाउन सकिएन भने मासुले रमाउने भन्दा पनि रोग निम्त्याउन सक्छ भन्ने जान्नु आवश्यक छ ।
चिकित्सक के भन्छन् ?
चिकित्सकका अनुसार दशैंका मासु खाँदा विशेष सावधानी अपनाउन सकिएन भने मासु स्वास्थ्य हानीकारक हुन सक्छ । मासु खानेले सबैभन्दा पहिले खसी, बोका वा कुखुरा स्वस्थ छन् कि छैनन् भनी जान्न आवश्यक छ ।
रोगी वा बिरामी पशुको मासुले रोग नै निम्त्याउने हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । मरेका पशुको मासु खानेलाई त मासु हानिकार मात्र हुन्छ भन्ने सुझाव चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
पशु चिनौं ?
यसबारे जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, चितवनका प्रमुख डा डिल्लिराम सेढार्इंलाई उद्धृत गर्दै रासस लेख्छ, ‘रोगी पशुको मासु खाएमा यसले दीर्घकालीन रुपमा स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउन सक्छ ।’
गाउँघरमा हरियाली खाएर हुर्किएका स्वस्थ पशुलाई चिन्न सक्नु पर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । उनका अनुसार मासुका लागि निरोगी पशु चौपाया बध गर्नुपर्छ ।
सामान्यतः नाकबाट सिँगान बगाएको, झोक्राएको, निन्याउरो, खुट्टा टेकेर उभिन नसकेको, टाउको झुकेको, आँखा चम्किलो नभएको, आँखामा कचेरा आएका पशु रोगी हुने हुँदा त्यस्ता पशुको मासु खानु हुँदैन।
कतिपय रोग पशुचौपायाबाट मानिसमा सर्ने उनले बताए ।
क्षयरोग, बोकाको अण्डकोष सुनिने ब्रुसेलोसिस, टेपवर्मजस्ता रोग पशु चौपायाबाट मानिसमा सर्नेहुँदा निरोगी पशु छानेर मात्र मासु खान सेढार्इंले सुझाव छ ।
मासु यसरी चैं नखाऔं है ?
पशुचौपाया बध गरेपछि निरोगी भए पनि पकाउँदा ख्याल गर्नुपर्ने चिकित्सक बताउँछन्। मुख्यरुपमा पोलेका, तारेका, केमिकलको प्रयोग गरी प्रशोधन गरिएका मासुले क्यान्सर रोग हुनसक्ने उनीहरुको भनाइ छ।
विगत १७ वर्षदेखि क्यान्सर विशेषज्ञका रुपमा बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा सेवा गरेर हालै मात्र निवृत्त हुनुभएका डा भोलाप्रसाद रौनियार रातो मासुमा बोसो धेरै हुने र त्यसलाई पोल्दा, तेलमा तार्दा र केमिकल मिसाएर बनाउँदा कार्सिनोजेनिक उत्पादन गर्ने हुँदा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने बताउँछन्।
यसले आमाशय र ठूलो आन्द्रामा क्यान्सर बनाउनसक्ने हुँदा यस्ता मासु नखान उनले सुझाव दिए।
मासु रक्सी र चुरोट एकै साथ खाने ? अनि कहाँ जाने ?
मानिसहरु मूर्ख जस्तै देखिन्छन् । मासु खाने बेला हरियो सागसब्जी, सलादहरु भन्दा पनि सुर्ती, चुरोट, रक्सी, मासु सँगै सँगै खाने गरेको देखिन्छ ।
चुरोट रक्सी र मासु कति घातक छ भन्ने बुझेको देखिदैन । यसरी खाँदा १५ गुणाभन्दा बढी क्यान्सर हुने सम्भावना रहने डा।रौनियारको भनाइ छ। धुवाँ, मासु र रक्सी एकै ठाउँमा भएपछि यो निकै खतरनाक हुने उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय युवापिँढीमा कोलोरेक्टल क्यान्सर अर्थात् ठूलो आन्द्राको क्यान्सर बढी हुने गरेको रौनियारले भनाइ छ ।
यसको प्रमुख कारण रक्सी, मासु र चुरोट नै हो।
नेपालमा सबैभन्दा बढी पाठेघरको मुख, स्तन र फोक्सोको क्यान्सर हुने गरेको छ। त्यसपछिको बढी क्यान्सर हुनेमा ठूलो आन्द्रा र आमाशय पर्ने गर्दछन् ।
चुरोटले अन्ननलीदेखि मलद्वारसम्म क्यान्सर बनाउने उनको भनाइ छ ।
दशैँका बेला मासु प्रयोग गर्दा उमालेर र सामान्य तरिकाले पकाएरमात्रै खानुपर्ने रौनियारको सुझाव छ ।
उनले मासु बढी खाँदा, रेसादार खाद्य वस्तुको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताए । फलफूल, सागसब्जी बढी खानुपर्ने बताउँदै उनले पाएसम्म ब्रोकाउलीको प्रयोग बढाउन सुझाव दिए।
मासुको खपत कम गर्न पनि उनको सुझाव दिए। ‘सम्भव हुन्छ भने मासु नखाँदा नै राम्रो हुन्छ, तर खानैपर्ने भएमा पनि माछा र कुखुराको जस्तो सेतो मासु खानु राम्रो हुन्छ ।’
पोलेको मासुले आन्द्रा र छालामा क्यान्सर हुन्छ, कसरी ?
मासु ग्यास वा दाउरामा पोल्दा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न हुने हुँदा हाइड्रोकार्बनले पेट, आन्द्रा र छालामा क्यान्सर हुनसक्ने खतरा बढी हुने चिकित्सक बताउँछन् ।
मासुमा गुलियो पदार्थ र प्रोटिन बढीमात्रामा हुनेहुँदा सिधै आगोमा पोल्दा उच्च तापक्रम उत्पन्न भई त्यसले एक्रिल्यामाइड्स उत्पन्न हुन्छ जुन क्यान्सर रोग गराउन सहयोगी हुने चिकित्सकको भनाइ छ।
नखाऔं बासी मासु
भरतपुर अस्पतालका फिजिसियन डा भोजराज अधिकारी रातो मासु विस्थापित नै गर्नुपर्ने बताउँछन्। हामीले मासु खानैपर्दा ताजा र स्वस्थ खानुपर्ने उनको सल्लाह छ।
मासु राख्दा कि त भुटेर राखिन्छ, कि त फ्रिजमा राख्ने गरिन्छ। यी दुवै तरिका हानिकारक हुने उनले बताए ।
फ्रिजमा राख्दा कडा संक्रमण फैलिनसक्ने उच्च खतरा हुने बताउँदै उनले भुटेर राख्दा किटाणुविहीन भएपनि अपच र पेटमा अन्य समस्या उत्पन्न हुनसक्ने उच्च खतरा हुने सुनाए ।
डा अधिकारी भन्छन्, ‘मासु धेरै थुपार्न हुँदैन, बोसो र नूनको मात्रा बढाउनु हुँदैन, मासु राख्नु पर्दा फ्रिजको तापक्रम ख्याल गर्नुपर्छ।’ उनले मासु खाँदा प्रशस्त फलफूल खानुपर्ने बताउँदै बनाएर राखिएको फलफूलको सलाद नखान सुझाव दिए ।
रोगीलाई मासु, रोग बढाउने साधन
मासु एक्लैलेभन्दा यसका साधन र साध्यका रुपमा मदिरा र धूमपान अरु खतरनाक हुने उनको भनाइ छ।
अन्य हल्का खानेकुरा पच्नका लागि १२ देखि १६ घण्टा लाग्दछ भने मासु २४ घण्टासम्म लाग्ने अधिकारीले बताए। यसले गर्दा ग्यास्ट्रिक हुने र झाडाबान्ता हुनेहुँदा विशेष ध्यान दिन सुझाव दिए।
पहिलेदेखि नै उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोलेस्टोरलजस्ता समस्या भएका बिरामीले धेरै मासु खान नहुने भन्दै स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गर्न उनले सुझाव दिए।
स्वदेशकै राजौं, आयात गरेर रोगै किन खाऔं ?
दशैँमा बढी खसीको मासु प्रयोग गरिन्छ जसमा खराब कोलेस्टोरलको मात्रा बढी हुने पनि उनको भनाइ छ।
नेपालमा अन्य समयमा आवश्यकमात्रामा मासु नखाने भए पनि दशैँका बेला ऋणधन गरेर भएपनि मासु खानैपर्ने र धेरै खाने पुरानो प्रचलन छ।
स्वदेशमै उत्पादन बढाउन सकिने कुखुरा र माछाभन्दा बढी आयात गरेर निर्भर हुनुपर्ने खसीबोका, राँगा, बंगुरको मासुको खपत अधिक हुने गर्दछ, जुन गलत छ ।
राम्रो मासुको नमूना, साथमा हरियाली र रेसादार सलादहरु